Gelbiskii Geerida- Q1aad - Abdikadir AskarAbdikadir Askar
Gelbiskii Geerida- Q1aad
Dhawaqa aan maqlayey wuxu ahaa mid aad u daran oo aan ku sigtay in ay dhagahu i qarxaan. Dhawr il-bidhiqsi gudaheed, waxa soo dhacday laambadii ii shidnayd, dabadeedna ku burburtay miiskaygii dushiisii. Aniga oo naxsan ayaan day-mooday daaqadii qolka aan ku jiray, waxa meel durugsan iiga muuqanayey dab aad u weyn iyo uuro is-wata oo hawaddii wada qabsaday.
Bannaanka qolka hadaan u soo booday, waxa aan arkay dadkii oo wada yaacaya. Waxa mar keliya isla wada oogsaday oohinta iyo baroorta dadka. Marka kadib ayaan bushaqadaydii gacanta la sii haleelay, dabadeedna cagaha wax ka dayey.
Waa meel aan ka fogayn xafiiskayga oo qiyaastii ilaa tobon guri dhexeeyaan Waxa is-dhex daadsan maydad aad u badan iyo dhaawacyo culus. Waxa ay indhahaygu markiiba halacsanayeen hilibka dadka ee sida qurub-qurubka ah dhulka u quban. Gacan qof oo dhiiggu tifiqda hayo ayaa iyana indhahaygu ku dheceen. Hareertayda waxa yaaley madax soo go’ay oo indhihii qalaleen.
Qalfoofka gaadhiga gubtay ayaan arkayey oo meesha yaallay. Gaadhigu aad buu u bes- beelay oo ay adkayd in laga soo baadi-sooco biraha kale ee oogadda dhulka ku filiqsan. Waxa si weyn iskugu dhex daadsanaa quraaradihii jab-jabay, burburkii dhismaha iyo meydadka dadkii goobta fadhiyey.
Haa goobta waxa ka dhacay qarax weyn cabbaar yar ka hor, ka soo dhamaan magaallada gilgilay. Waxa meesha is-wada dhex yaacayey dad aad u tiro badan, askartuna waxa ay rasaasta u ridayaan kor iyo hoos, waxa ay u eekaayeen kuwo ay ka luntay xasiloonidii.
Waxa ii muuqday haween barooranaya oo qaarkood dhulka isla dhacayaan. Xaaladda goobtu waxa ay ahayd mid aad u adag, unna naxdin badan. Dhawaaqa dhooliga dhaawaca guraya iyo dhiillada meesha ka jirtay ee dhawaqeedu uu dhegahayga ku soo dhacayey, indhahaygana ku arkayey, aad bay iiga argagax- gasheen.
Waxa aad u fiiriyey madaxyada dadka goobta ku go’ay. Aniga oo arki karayey ilaa sodomeeyo qof oo meydkoodu gubtay, qaar kalena jidhkoodu googay. Meydadka waa kala firidhsanaayeen, qaarkoodna wayba isku dhageen oo waxa hoos qul-qulayey dhiig badan.
Anigu waxa aan durba bilaabay shaqo aan la ii dirsan. Waxa aan baadhayey gaadhiga goobta ku qarxay iyo raadka uu reebay. Iyada oo ay ujeedadaydu ahayd helidda astaamo laga tix-raaci karo cidda fulisay iyo walxaha loo adeegsaday.
Maalmahaas ka hor uun baan ka soo laabtay safar aqoon-korodhsi oo aan ku qaadanayey Saldhiga Ciidamadda Maraykanku ku leeyihiin Dalka Jabuuti. Taas oo qayb ka ahayd waajibaadkayga shaqo ee aan ugu adeegi jiray shirkad amaanka ka shaqaysa oo xarun ku leh magaalada Niyuuyook. Shirkadaas, oo si hoose u caawin jirtay xarunta Nabad-suggida Soomaaliyeed, arrimaha la xidhiidha xuuraanka iyo daba-gelka fal-danbiyeedada caalamiga ah.
Waxa aan si deg-deg ah u xidhay gacmo-gashi cadcad oo aan jeebka danbe ee surwaalkayga tuutaha ah kuwatay. Waxa aan kolba is-taagay goobo kala duwan oo isla meesha qaraxu ka dhacay ah. Jiho kasta waan ka maray, waxa aanan siyaalo kala duwan u suureeyey sida gaadhigu goobta u soo galay iyo qiyaasta xawaaraha uu ku socdayba.
Maskaxdaydu waxa ay dib u xasuusatay goobtu sida ay ahaan jirtay: madal qaxwe macaan lahayd, dhallinyaro badanina ku caweyn jireen, wakhti badana aan habeenkii ka qaxweeyay. Wuxu ahaa hudheel si farshaxanimo ku dheehan tahay loo qurxiyey. Waxaana laha Guuleed Boocow oo aan isku niqiin qurbaha, muddo badana aan ka wada shaqayn jirnay arrimo la xidhiidha jaalliyada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Aad ayay goobtu u gubatay, burburka baahsan ee indhahaygu qaban karayeena ma ay ahayn laga wada bogan karayey. Waxa soo dumay dhiska dabaqii labaad oo ay ku xidhnaayeen quraarado iyo biro ‘almuuniyam’ ah. Kuwaas oo si aan kala- hadh lahayn u soo daatay, oo goob kasta oo hudheelka ah ku filiqsanaa.
Cabbaar kadib, waxa aan dhex lugeeyey meydadkii goobta daadsanaa, anniga oo kolba mid ka dul-talaabaysanaya. Waxa aan u dhawaaday iridda hore ee laga soo galo hudheelka. Taas oo qiyaastii iila muuqatay in gaadhiga wax qarxiyey markii hore xoog ku soo jiidhay. Waxa aan eegay birtii amaanka oo aan waxba qabin. Haddana waxa aan arkay qolkii ciidanka ilaalada goobta oo aan waxyeelo weyni aanay soo gaadhin. Waan yaabay!
Waxa aan baadi-goobay askartii goobta ilaalinaysay, mise waa dhaawac oo waxa lagula sii ordayaa gaadhiga dhooliga ah ee bannaanka yaal. Waan sii amakaagay! Waxa iga daaddegi weyday birta amaanka ee aan wax buurrani gaadhin,askariga dhaawaca ah iyo qolkoodii oo aanay wax dhibaato ahiba ka muuqan.
Inta aan beerka dhulka saaray ayaan xidhay muraayadii madaxa ii saarnayd. Meel aan sidaas iiga fogayn waxa aan ka arkay waraaqo ay dabayshu dhinac u eryeyso, kuwaas oo aragoodu iga mashquuliyey baadigoobkii aan ugu jiray walxihii qaraxa.Aniga oo ka niyad-jabsan waxa dhacay si hal-haleel ah gacanta ula tiigsaday buuggii yaraa ee dabayshu waday. Mise waa baasaboor aad u gubtay oo jeldigii sare iyo qaybta warbixinta qofkuba maqan yihiin. Sida loo aqoonsado cidii lahayd way adkayd.
Deg-deg baan ugu riday bac yar oo aan kala soo baxay bushqadii halka danbe ii sudhnayd. Waxa aan la soo baxay kamaradii dabadeedna sawiro badan goobtii ka qaatay. Inta aan telefankii dhegta saaray ayaan dalbaday gaadhigaygii shaqada. Gaadhigii oo ciidan badan ilaalinayaan ayaa muddo yar gudaheed igu soo gaadhay, markaas baan darawalkii amray in uu i geeyo xeraddii nabad-sugidda.